Àtụ:Infobox medical condition
Ọmụmụ nwa (Kameroon).
Ọmụmụ nwa,nke amakwa dịkaime ime mmadụ n’ịmụ nwabụ mgbe oge zuru nwaanyị ịmụ otu nwamaọbụ karịabụnwatakịrị isi na akpa nwa nwanyị pụta. N’afọ 2015, amụrụ ụmụ dị nde 135 n’ụwa niile. Ihe dịka nde 15 oge ezubeghị ya bụ izu ụka 37,ebe pasent 3 ruo 12 ka amụrụ izu ụka 42. Na mbandị mepere emepea na-amụkarị nwa n’ụlọọgwu, ebe mba ndị ka n’emepe emepen’amụ nwa n’ụlọsite enyemaka ndị n’arụ ọrụ ahụike n’ụzọ omenala n’akwado.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ọmụmụ_nwa&oldid=69071
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 12 Ọnwa isii 2021, mgbe 04:07